Nhau - Aina Lighting yakagadzira Beijing Hofisi paSep 16th, 2019.
Aina Mheni yakagadzika Beijing Hofisi paSep 16th, 2019.
Aina Lighting akagadzira Beijing Hofisi muna Sep 16th, 2019.
Aina Lighting yakavambwa muna2016, kusvikira zvino yatove makore matanhatu. Makore matanhatu ese aya, isu tinongova nehofisi imwe chete yekutengesa muShanghai. Sezvo kuwedzera kwekutengesa kwatinako, imwe hofisi yekutengesa yatokwana isu, saka tinosarudza Beijing senzvimbo yehofisi yedu yechipiri.
Beijing Hofisi iri kunyanya kutarisa kune Export Bhizinesi. Ichaona nezvese misika yekunze. Mwenje yedu yatosvika kune anopfuura gumi nyika dzakadai sePhilippines, Thailand, Nigeria, Zambia, France, Austria, UK, Poland, Fiji, Peru, Jamaica nePeru.
Mushure mekumisikidzwa kwehofisi yeBeijing, hofisi yeShanghai seyedu dzimbahwe rinozove rekushambadzira kwemuno uye Nyowani dhizaini dhizaini. R & D nzvimbo ichagadzwa muShanghai Center. Uye hofisi yeShanghai ichave iri zambuko pakati pekutengesa nemafekitori edu.
Hofisi yeBeijing ichatanga kubva kuvamiriri vashanu vekutengesa. Madhipatimendi matatu achamisikidzwa kuhofisi yeBeijing mukati memakore maviri. Aya madhipatimendi matatu anonyanya kuve eEuropean Nyika neAsia, Central & South America musika, Africa & Oceania nyika. Vanhu vakasiyana vanobata misika yakasiyana uye misika yakasiyana inoshandisa nzira dzakasiyana dzekusimudzira, kuitira kuti tizive misika yekukunze zviri nani kupfuura pakutanga. Mwenje yedu ichagadziridzwa zvakare zvichibva pane zvakasiyana zvinodiwa kubva kumisika dzakasiyana.
Aina Beiijng hofisi iri muChangping, iyo inonzi kumashure kweBeijing. Iri zvakare padyo nepasi pechiteshi cheChangping line, uye nendege yeBeijing iyo iri nyore kuti vatengi vashanyire.
Imba nyowani yekuratidzira ichagadzwa munguva pfupi muhofisi yeBeijing, kuitira kuti vatengi vaone magetsi ese muhofisi yedu yekutengesa vasati vasvika mufekitori. Mwenje yese inobatwa naAina Lighting ichave irori mune yedu yekuratidzira imba muhofisi yeBeijing.
Aina Lighting Beijing Hofisi ichagadziriswa mushe! Ndinovimba tinogona kuseta mamwe mahofisi kuno kuChina kana kune dzimwe nyika munguva pfupi.
Post nguva: Aug-25-2020